"I-Biosphere" Yehlabathi kunye nawe. - I-Airbnb
"I-Biosphere" Yehlabathi kunye nawe.
Ungquphantsi sinombuki zindwendwe onguGraciela
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-9 Dis.
I-architecture iyodwa, idibaniswe kwindalo kunye nezilwanyana, i-llamas, ihashe, i-geese, i-peacock, intlanzi kwi-lagoon. Ihektare enye ejikelezwe zizithuba eziluhlaza, imihlaba emihle kunye noxolo. 20 'ukusuka embindini wesixeko. Zonke iinkonzo zendlu esebenzayo, abanini bahlala kwi-30 m. Kukho imakethi ekufutshane apho ungazithengela khona. Imozulu intle kakhulu unyaka wonke, ukutya eCochabamba yenye yezinto ezikhangayo, kunye nezitya eziqhelekileyo, imifuno emitsha ekhuliswe malunga ne "La Biosfera"
Izilwanyana zikhuselwe, izilwanyana ezisengozini zihlala apha kwaye zibuyela kwindawo yazo kunye nendlwane kwakhona. Sinentlanzi, i-African geese, i-peacock, i-llamas, ihashe yindawo efuna ukudala ulwazi ngentlonipho yendalo, sifumana ukutyelelwa okulawulwayo kubantwana abaneprogram yokufundisa ngokusingqongileyo. Ubume bendawo yi-organic, iprojekthi yophuhliso olude oluphakathi kunye nedama lendalo lendalo elitshisayo, i-hydromassage waterfall, eyilwe kwaye yakhiwe ngumnini ngokwakhe.
Sinezilwanyana kuquka neentlobo ezisemngciphekweni esithi sizondle kwaye sizikhusele. Ezi zilwanyana ziquka iintlanzi, amarhanisi aseAfrika, iipikoko, iillama kunye nehashe. Le yindawo ngokukodwa efuna ukwazisa ngentlonipho eyimfuneko yendalo apho side sifumane ukutyelelwa ngabantwana ngenkqubo yokufundisa ngendalo esingqongileyo. Uyilo apha luyi-organic kwaye luyinxalenye yeprojekthi enkulu ekwinqanaba eliphakathi lophuhliso. Le projekthi ibandakanya i-tropical biosphere, ichibi lendalo kunye ne-waterfall spa zonke eziyilwe kwaye zakhiwe ngumnini.
4.91 · Izimvo eziyi-37
Ubukhulu becala ubumelwane bulima, balima zonke iintlobo zemifuno, ngamaxesha athile itheko elinyakazelayo, abantu banobuhlobo kakhulu, indawo entle kakhulu engqongwe ziintaba ezidla ngokuba nekhephu izihlandlo eziliqela ngonyaka, imozulu efanelekileyo ngalo naliphi na ixesha. unyaka.
Lo mmandla uzaliswe ngabantu abanobuhlobo yaye ubukhulu becala kwezolimo, kulinywa zonke iintlobo zemifuno. Ijikelezwe ziintaba ezidla ngokuba nekhephu izihlandlo eziliqela ngonyaka, inika imozulu efanelekileyo kulo naliphi na ixesha lonyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Graciela
Nakuphi na ukuthandabuza, umbuzo, kufuneka siya kuhlala siphulaphule, siya kunxibelelana ngokobuqu okanye ngefowuni, sihlala kwiimitha ezingama-30 ukusuka kwindlu / indawo yokuhlala. Siya kwiintlanganiso zomsebenzi, ngemihla yokuzalwa, izikhumbuzo, ukuba nje azidluli kubantu abali-15.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo, nceda ubuze. Sisoloko sikulungele ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Sihlala kwipropati enye malunga neemitha ezingama-30 ukusuka kwindlu. Senza iintlanganiso zomsebenzi, imihla yokuzalwa, kunye nezikhumbuzo ukuba azidluli kubantu abali-15.
Nakuphi na ukuthandabuza, umbuzo, kufuneka siya kuhlala siphulaphule, siya kunxibelelana ngokobuqu okanye ngefowuni, sihlala kwiimitha ezingama-30 ukusuka kwindlu / indawo yokuhlal…